पुरुषवादको चपेटामा दरखाने महिलाहरु « Postpati – News For All
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा छौ । “एक्काइसौं शताब्दी” भन्दै कहिलेकाही फेसबुक तिर नि बजाई रहेका हुन्छौ । तर नारीले मदिरा तानेको फोटो देख्दा मात्रै पनि तिम्रो मध्ययुगीन चेतना बोकेको खोपडीमा प्रलय हुन्छ । ओ महापुरुष । तिमी संन्चै छौ ? आफ्नो आफ्नो रुचि अनुसारको दर खान देउ न । तिमीलाई खिर र ढकाने मात्रै किन कोच्याउनु परेको छ ? मैलै भनेको खानुपर्छ, मैलै भने जसरी लाउनु पर्छ, मैले भनेकै खुट्टो उचालेर, मैले भने जसरी नै नाच्नुपर्छ भन्ने जिम्वाल मान्यता बिसाउ न यार । हद नगर न । तिमीलाई सारै तिजको संस्कृति बचेन जस्तो लाग्छ भने, आफै रातो सारी र हरिया चुरा लगाएर नाच । राती उठेर खिर र ढकाने खाउ र श्रीमतीको नाममा दिन भरी व्रत बस । आखिर तिमी पुरुष हौ । धर्मसंस्कृती बचाउनु तिम्रो पनि दाईत्व हो । – सन्तोष चिमरिया
गतिशील समयले पुरुषका चेतनाहरु जसरि फेरी दिएको छ, त्यसरी नै महिलाहरुको चेतना पनि फेरिनु स्वाभाविक छ, त्यसकारण पनि लेखक सन्तोष चिमरियाको माथिको भनाईमा सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार रहेको छ।
तिजको दरखाने सन्दर्भ बोकेर एउटा फोटो सामाजिक संजालमा मजाक बन्दै कुदिरहेको छ। अहँ त्यसो होइन निर्जीव फोटो कहिलै कुद्दैन। स्व:घोषित महापुरुषहरुले मजाक बनाएर कुदाइ रहेका छन्।
एउटा अपरिचित फोटो सामाजिक संजालमा पुरुष दाजु भाइहरुले भद्दा मजाक बनाई रहेका छन् । फोटो यसैपालिको हो या पुरानो हो त्यसबारे एकिन छैन तर हिन्दु नारीहरुको हरितालिका तिज आउनु पुर्ब ठिक दरखाने दिनलाई टार्गेट गरेर सामाजिक संजालमा हाम्रा २१औं सताब्दीका परिवर्तन कामी महापुरुषहरुले खिल्ली उडाउइ रहेका छन्, यो दुखद छ।
तस्बिरमा केहि सुकिला मुकिला महिलाहरुको समुहको बिचमा चारपाटे टेबल छ, उक्त टेवल माथि रोस्ट चिकेन, दहि जस्तो देखिने सेतो घोलक पदार्थ, सलाद संगै अल्कोहल युक्त पिय पदार्थ ग्लासमा देखिन्छ।
यद्द्यपी, अल्कोहल युक्त पिय पदार्थ पिउनु स्वस्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ, सामाजिक बहिष्कारको रुपमा लिइन्छ, वा जाँड रक्सि पिउनु हुदैन भन्नेमा जोड गरिन्छ। बाँकी अन्य खान्की बारे स्वतन्त्रताको बिषय हो, खानामा कुनै हद र सिमाबन्दी हुदैन, त्यो पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आएर ।
तर सामाजिक संजालमा दाजुभाईहरु उक्त फोटो बोकेर आफ्नै दिदीबहिनीहरुलाई उदाङ्गो पार्न तल्लिन देखिन्छन। यहि नियत हो पुरुषबाद, पुरुषबादी सोंच। जसले महिलाहरुलाई खुल्ला आकाशमा उड्नबाट बन्चित गराउन चाहान्छन। महिलाहरुको आत्म स्वतन्त्रतालाई कैद गर्न चाहान्छन। जब कि यिनै पुरुष महाशयहरु खुल्ला आकाशमा उडिरहेका छन्, स्वयम् बिकृतिको भण्डारमा अल्झी रहेका छन्।
भन्नुको तात्पर्य, यो धर्तिमा बसोबास गर्ने हरेक मानवहरु कसैको नियन्त्रणमा रहेर दासी बन्न सक्दैन, हरेक मानवका चाहा र इच्छाहरु उस्तै र सम्मान हुन्छन। २१औं सताब्दी भनेकै एकले अर्काको चाहानाहरुलाइ आत्मसम्मान गर्नु हो।
यस्तै सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्नहरु उठ्ने गर्छन, महिलाहरुले रक्सि पिउदा बिकृति हुने, पुरुषले पिउदा संस्कृति हुने कहाँ लेखेको छ ? महिलाहरु जमघट भएर रमाइलो गर्दा नैतिकता गुम्ने, पुरुषहरुले रमाइलो गर्दा इज्जत बढ्ने कुन शास्त्रमा छ ? महिलाहरुले तास खेल्दा घरखेती गुम्ने, पुरुषहरुले खेल्दा संसार जित्ने कुन कानुनमा उल्लेख छ ?
होइन भने त्यो महापुरुष बिकृतिको भण्डारमा बसेर महिलाहरु माथि औला उठाई रहनु लैंगिक विभेद हो, पुरुषबादको चरम उत्कर्ष हो। हरेक सन्दर्भमा महिलाहरुलाई मजाक बनाउने पुरुषबादले यसपाली दरको सन्दर्भ बोकेको फोटोलाई हतियार बनाएर चारैतिर आक्रमण गरेका छन्। यो महिलाहरुको आत्मसम्मानमा भएको आक्रमण हो।
पुरुषवादले जबर्जस्ती लाद्न खोजेको हैकमबाद हो। परिवर्तनको ढ्वांग फुक्ने मध्ययुगीन चेतना हो। यी भद्दा मजाकहरु मुक्तिकामी महिलाहरु माथि कसी लाउने सड्यन्त्रकारी प्रपंचहरु हुन्।
आधा आकाश ओगटेका महिलाहरुलाइ चेतना होस्, संस्कार र संस्कृतिको कसी लाएर मध्ययुगीन चेतनामा बाँच्न बिबश पार्ने पुरुषहरुको यस्तो हर्कत कतिन्जेल सहेर बस्छौ ?
८ भाद्र २०७४, बिहीबार को दिन प्रकाशित